LibreOffice keessaa, galmeewwan kanneen kaadimaa WebDAV irratti kuufaman aaloo HTTPS hayyisaa fayyadamuun banuu fi ol kaa'uu ni dandeessa.
WebDAV HTTPS irra fayyadamuuf qaaqota faayilii LibreOffice fayyadamuu qabda.
Faayilii - Bani fili.
Sanduuqa File name keessaa, karaa gara ukaankaa WenDAV galchi. Fakkeenyaaf, walindhaa hayyisaa gara WebDAV teessoo IP 192.168.1.1 tti argamu banuu fi qabiyyeewwan ukaankaa ukaankaasaphaphuutarreessuufhttps://192.168.1.1/ukaankaasaphaphuu galchi
Yommuu yeroo jalaqabaaf kaadimaa WebDAV tti walindhitu, qaaqa "Abboommaa hin Beekamneen Iddoola saphaphuu Raggaasifame" argita.
Qabduu Ragaa Malagi cuqaastee ragicha malaguutu sirra ture.
Yoo ragicha fudhatte,"Ragaa kana yeroodhaaf tursa kanaaf fudhu." filitii TOLE cuqaasi. Amma gaaffilee dabalaa malee faayiloota kaadimaa WebDAV irraa banuu fi ol kaa'uu ni dandeessa, hanga LibreOffice keessaa baatutti.
Yoo ragicha hin amantu tahe, Haqi cuqaasi.
Yoo ragicha fuuteetta tahe, amma maqaa yookiin maqoota faayilii banuu barbaadduu filadhuutii Bani cuqaasi.
Yoo wal simannaan maqaa mandhee ragicha keessatti kenname fi maqaa mandhee ati qaaqa faayilii keessa galchite gidduu hin jiru tahe, qaaqa dirqalee armaan gadii kamiyyuu irraa akka filattu eeyyamu argita:
Ragaa Mul'annoo - Qaaqa Ragaa Mul'annoo Bana.
Itti fufi - Yoo mandheewwan lamaanuu wal fakkaachuu isaanii shakkii hin qabdu tahe, qabduu itti fufii cuqaasi.
Walindhaa Haqi - Walindhaa haqa.
Yoo Itti fufi cuqaaste, qaaqa kan akka maqaa fayyadamaa fi iggitaa kee galchitu si gaafatu argita.
Title is: HTTPS irra WebDAV Fayyadamuun Galmee Banuu